FAQs | TVET Myanmar
သင်၏ အလုပ်အကိုင်အခြေအနေကို ဖော်ပြပါ။
အကယ်၍ သင်သည် သက်မွေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်များ၊ အစိုးရ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံများနှင့် နည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းများမှ ကျောင်းပြီးသောသူဖြစ်ပါက ယခုသင့်ရဲ့ အလုပ်အကိုင်အခြေအနေနှင့် လစာနှုန်းထားကို ဖော်ပြပေးပါ။
Thu, 2017-03-09 08:39
Searchingajob now!
အင်တာဗျူးအောက်ပါအပေါ် others.Focus နှင့်အတူရဖို့သင့်ရဲ့စွမ်းရည်အကြောင်းကိုထွက်ရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေသည်:
အင်တာဗျူးသင်စူပါဗိုက်နှင့်သင်မည်သို့ခွင့်အာဏာနှင့် ပတ်သက်. ခံစားရနှင့်အတူအရဘယ်လိုထွက်ရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေသည်။ သငျသညျပွောဆိုစေခြင်းငှါ,:
အင်တာဗျူးပိုကောင်းတစ်ခုခုတစ်လျှောက်ကြွလာမှသာမှီတိုငျအောငျသငျသညျ Over-အရည်အချင်းပြည့်ရှိပါတယ်ထင်နှင့်ဤအလုပ်လိုပေမည်။ သငျသညျအစဉ်အမြဲအသစ်ကျွမ်းကျင်မှုလေ့လာသင်ယူနေသောကြောင့်အဘယ်သူမျှမအလုပ်အစဉ်အဆက်ပျင်းစရာကောင်းကြောင်းစိတ်ဖိစီးမှု။ သင်ကုမ္ပဏီနှင့်အပြန်အလှန်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်အကျိုးခံစားရမယ်လို့ပုံကိုဖျောပွပါ။
အင်တာဗျူးသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရွေးချယ်မှုကိုရန်သင့်ကတိကဝတ်နှင့် ပတ်သက်. ထွက်ရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေသည်။ သငျသညျအလုပျကိုခစျြသို့မဟုတ်ပဲသင်ပိုက်ဆံရနိုင်မည်သည့်အလုပ်မယူသောကြောင့်, တစ်နည်းအားသင်ပြုပါကြဘူး။ သငျသညျနှစျပေါငျးမြားစှာအဘို့ဤအလုပ်ကိုပြုမှုကြောင့်တစ်ဦး layoff မှရပ်တန့်လျှင်, သင်လို့ပြောစေခြင်းငှါ,: